Sydney Skies – Timelapse video in 4K – deepesh.com
फोटोग्राफीको विभिन्न विधा मध्ये मलाई टाइमल्याप्स एकदमै मन पर्छ। पहिला पहिला जब पनि म Discovery अनि National Geography च्यानलहरुमा यस्ता टाइमल्याप्स भिडिओ हरु देख्थे आफै सोच्थे ‘कसरि बनाएको होला’? सोध्ने कोहि नभएकोले आफैले आफैलाई उत्तर दिए ‘पक्कै पनि लामो भिडिओ खिचेर त्यसलाई फास्ट गर्छन होला ‘ तर गलत रहेछ मेरो अनुमान। भिडिओबाट गर्न नमिल्ने त होइन तर त्यति राम्रो हुदैन। तल को भिडिओ जस्तो बनाउन चाही कहीं अन्तराल मा फोटो खिचेर त्यसलाई पछि जोडेर भिडिओ बनाउने हो। यदि टाइमल्याप्स बनाउन सिक्ने भए मैले एउटा भिडिओ राखेको छु युट्युबमा।
टाइमल्याप्स बनाउन सबै भन्दा धेरै चाहिने चिज हो ‘धैर्यता’, घन्टौ घण्टा एकै ठाउमा बस्न पर्ने हुन्छ। जाडो गर्मि केहि नभनी। खिचेर मात्रै काम सकिदैन त्यसलाई फेरि कम्प्युटरमा जोड्न पर्यो। मलाई राम्रो याद छ मैले काठमाडौँको टाइमल्याप्स बनाउदा ‘चोभारको खोला बगेको सिन खिच्दा’ त्यो खोला यस्तो गनाएको थियो कि के भन्ने ? अरु बेला भए मा एक सेकेन्ड पनि बस्दिन थिए होला तर त्यो बेला मैले झन्डै ६ घण्टा बिताए, एक्लै, एउटा आशमा कि पछि यो भिडिओले कसैको मुहारमा मुस्कान ल्याउने छ। काठमाडौँको तपाईले हेर्नु भएको छैन भने, हेर्न नभुल्नु होला।
तलको सिड्नीको टाइमल्याप्स बनाउन मलाई झन्डै १० महिना लाग्यो, यो १० महिनामा हरेक दिन त यसको लागि काम गरिन तर हफ्ताको ३ दिन चाही गर्थे। पहिला को भन्दा अलि बढी ज्ञान भयो , अझै सिक्न धेरै बाकि छ। मलाई अब नेपाल गएर यस्ता थुप्रै टाइमल्याप्स बनाउन मन छ। मनाङ्ग, मुस्तांग, जोमसोम जाने योजना बनाउदै छु। तल को जस्तो टाइमल्याप्स कसरि बनाउने त्यो पनि बनाउने छु, अहिलेलाई चाही तलको भिडिओ हेरेर कस्तो लाग्यो भन्नु होला।
Tagged: sydney timelapse youtube